Ababhikishi bamise yonke into, kwavalwa nezikole eVuwani | News24
Ababhikishi bamise yonke into, kwavalwa nezikole eVuwani
Vuwani – Ukufunda kanye neminye imisebenzi yasemphakathini ime nse eVuwani, eLimpompo, njengoba abahlali bakuleli lokishi kanye nasezindaweni ezingomakhelwane bethi abafune lutho oluvela kumasipala omusha.
Iqeqebana elizibiza ngePro-Makhado Task Team, nelilwela ukuthi iVuwani ikhishwe ngaphansi kwamasipala omusha eLimpompo, eVhembe district, selihlanganise abalandeli balo ukuba bagcwale imigwaqo.
Lokhu kulandela umhlangano wangoLwesihlanu phakathi kwethimba longqongqoshe likahulumeni kanye nabaholi bomphakathi waseVuwani, nowaphela ngokuthi izinhlangothi zombili zifinyelele esivumelwaneni.
Ngempelasonto bekusatshalaliswa amapheshana ezitaladini kanye nasemaspaza akule ndawo abemema abahlali kulokhu okuchazwe njengomhlangano “wokuphusha okokugcina” ozoba ngoMsombuluko wokuxoxa ngalo mkhankaso kahulumeni wokufaka iVuwani ngaphansi kwamasipala omusha
Lesi simemo besithi abahlali bazomasha belibhekise emahhovisi kamasipala nalapho bezofike bafune khona ngo dli izikhiye “zamasipala wethu”, nokuyindlela ababiza ngayo umasipala waseMakhado.
Sekunesikhathi eside umphakathi wakule ndawo ulwisana nesinqumo seMunicipal Demarcation Board's (MDB) sokuwufaka ngaphansi kwamasipala omusha.
Okhulumela leli thimba lo mphakathi, uNsovo Sambo, sekukaningi efanisa lesi sinqumo nesenzo sokudlwengulwa.
Lokhu kwaholela ekutheni izakhamuzi zidube ukhetho lohulumeni basekhaya ngonyaka odlule kanti kwaphinde kwashiswa nezikole ezingaphezu kuka-26.